Planet Venus :: Mapuraneti Nhasi -
Iyo Planet Venus
Venus kuenzanisa nepasi
Chikwereti: Mattias Malmer, kubva kuNASA / JPL data
Yepedyo Planet Pasi
Venus ndiyo yechipiri nyika yepedyo kune Zuva uye inotenderera mune yakatenderera sedenderedzwa pamamirioni 108 km. Sezvo ichitenderera, Venus inosvika padhuze nepasi kupfuura chero imwe nyika mune rezuva uye inogona kusvika mukati memamirioni makumi mana emakiromita.
Spins Zvishoma nezvishoma nzira isiriyo!
Venus inotora mazuva angangoita mazana maviri nemakumi maviri nemashanu kutenderera Zuva uye rinotenderera padanho rinononoka kamwe kamwe pamazuva makumi maviri nemaviri - uye nenzira yakatenderera nguva (sekuonekwa kubva mukutarisa pasi paZuva kuchamhembe pole). Uranus chete (iyo inongoda kutenderera padivi rayo) zvakare ine yakatenderera nguva. Nekuda kwekutungamira kwekutenderera uye kufamba kwekutenderera, zuva paVenus (pakati pezuva kusvika pakati pezuva) rinotora mazuva gumi nemakumi manomwe nenomwe epasi. Saka kunyangwe hazvo Venus iine mwero unononoka kutenderera wepasi rose, zuva rekushandisa Venus ipfupi pane zuva rinoshandiswa paMercury.
Venus inogona kunzi iine hunyoro axial kurereka kwemadhigirii 2.6, kana, nekuti masayendisiti anotora kutungamira kwekutenderera kuverengera, kurereka kukuru kweLive.4 degrees.
Yepedyo saizi kuPasi
Venus, ine dhayamita ye12100 km, ingangoita saizi yakafanana nePasi (1000km diki), uye ine 80% yehuremu hwepasi. giravhiti yayo pamusoro ndeye 90% iya yePasi.
Iyo Hottest Planet muSolar System
Venus ine mhepo yakanyanyisa yakaoma ine kumanikidza kwepamusoro kanopfuura ka90 iyo yepasi. Iyo mhepo ine carbon dioxide ine makore gobvu e sulfur dioxide. Iyi mhepo ine simba rakanyanya kupisa rinozivikanwa musystem inochengeta nyika iri paine tembiricha inogara iripo ye460 degrees C. Izvi zvinoita kuti Venus ive inopisa kwazvo mune yezuva, ichipisa zvakanyanya kunyangwe iyo mercury iyo iri pedyo neZuva zvakapetwa kaviri. .
Musoro weVenus, kunyangwe wakavanzika kubva pakuonekwa nemakore gobvu, wakavezwa mepu uchishandisa radar uye inozivikanwa kuti yakafukidzwa nenzvimbo huru dzakaputika dzemakomo ane nzvimbo mbiri dzakakwirira dzepasi (makondinendi) nemakomo nemipata. Iyo yepamusoro inoratidzawo kukanganisa crater uye volcano senge zvivakwa. Venus ine simba rakanyanya simba remagineti.
Nekuti Venus iri padyo neSuva, kazhinji ndiyo nyeredzi yekutanga kuoneka manheru uye yekupedzisira kutsakatika mangwanani. Nekudaro yakagara ichizivikanwa se 'nyeredzi yemanheru' uye 'nyeredzi yemangwanani'.
MaGreek ekutanga akatumidza zvinhu zviviri izvi zveVenus 'Phosphorus' uye 'Hesperus' uye maRoma 'Lucifer', (kureva 'Chiedza -Munounza'), uye 'Vesper'.
Kuedza kutumira ma probe kupasi kwakatanga muhucheche hwekubhururuka muchadenga. Muna 1961, iyo Russian probe Venera 1 yakatumirwa kunosangana nenyika, asi kutaurirana kwakarasika mukufamba. IU.SA yakazoedza kuvhura mariner 1 muna 1962, asi yakaparadzwa nemurairo kubva kunzvimbo yekudzora maminetsi mashoma mushure mekumisikidzwa sezvo yaifamba zvakadaro. Mariner 2 yakavhurwa mwedzi wakatevera uye yakaita nhunzi yapfuura Venus muna Zvita wa1962 uye yaive yekutanga yakabudirira robhoti interplanetary mishoni. Yakabudirira kuyera mhepo, tembiricha yepasi magnetic field uye radiation mwero.
MaRussia akatumira chiongorori Venera 3 muna 1966 chakave chekutanga kuongorora kupinda mumhepo yeimwe nyika. Nehurombo haina kudzosa data repuraneti. Yakateverwa naVenera 4 iyo yakadzosa data iyo yakaratidza pakati pezvimwe zvinhu, kuti iwo mhepo yaive yakaoma zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa. Uchishandisa iyo data kubva kuVenera 4, yakagadziriswa probes Venera 5 ne6 zvakatumirwawo kupasi mune ma60's - kana kurarama kwenguva yakareba zvakakwana kuti isvike pamusoro. Mariner 5 zvakare yakaita kubhururuka-uye data rakagovaniswa pakati pevaRussia neAmerica masayendisiti.
Munguva yemakumi manomwe nemakumi masere emamishinari akawanda akatumirwa kupasi naVenera 7 achive wekutanga kuongorora kutumira sainzi kubva kumusoro (kwete kungoita mhepo) yeimwe nyika. Venera 9 ne10 vaive mamishini ekutanga kutumira kumashure mifananidzo yepasi peVenus. Iyi yaive mifananidzo yekutanga kugamuchirwa kubva pamusoro peimwe nyika. Venera 11 ne12 vese vakatambura lens cap kuburitsa kutadza kudzivirira mifananidzo kudzoserwa.
Venera 13 yakatevera uye yakaongorora masampuli evhu uye Venera 15 ne16 dzakapinda orbit kukamota pamusoro uchishandisa radar. VaAmerican vakatumira Mariner 10 kutora mifananidzo pasi zvakadzama uye chirongwa chePiyona Venus chakatumira maOrbiters uye mana emuchadenga kumusoro. Muma 90's NASA's Magellan Chikwata yakatenderedza nyika kubva muna1990 kusvika 1994 isati yarova pasi nemaune.
Venus yaidzidziswa neEuropean Venus Express Spacecraft iyo yakatenderera nyika kubva muna Kubvumbi 2006 kusvika ichirovera mairi imwe nguva muna Ndira, 2015.
iyo nyika ine zuva rakapfupika
Venus Express yakaita zvakawanda zviwanikwa kusanganisira:
1. Kune mavhiri asina kugadzikana mudenga rematanda.
2. Panoita kunge paine chiitiko chegomo rinopfuurira pasi pemakore anoonekwa senzvimbo yekupisa uye nesarufa makore.
3. Venus inoita kunge iri kutenderera zvishoma nezvishoma (nemaminetsi 6.5 pazuva) pane kuyerwa neyemuchadenga yeMagellan ichipa fungidziro yekuti musimboti wayo wakaumbwa sei.
4. Mhepo inomhanya mudenga remuchadenga yakawedzera kubva ku300kmph kuenda ku400kmph mukati mekutumwa.
5. Kune hunyoro hunotonhora zvikuru (-175 degrees C) 125km kumusoro mudenga rine matunhu anopisa zvakanyanya pamusoro nepazasi paro. Rukoko urwu runogona kunge rwune chando kabhoni dhayokisaidhi.
Iyo Messenger probe yakagadzirawo zviyero panguva mbiri dzekubhururuka-pasts muna 2006/7 munzira yayo kuenda kumekiyuri.
Venus parizvino iri kudzidziswa neyeJapan spacecraft Akatsuki . Roketi mota yakakundikana yakatadzisa Akatsuki kupinda munzira yayo muna 2010 ichikonzera kutenderera Zuva kwemakore mashanu risati raiswa mukati mekutenderera muna Zvita 2015 vachishandisa varovi. Kubva Chivabvu 2016 yanga ichiita zvidzidzo zvesainzi zvemhepo yeVenusian.
Pakati pezvimwe zvakaonekwa, Akatsuki akawana huta hwemhepo muVenusian mhepo inoita kunge inokonzereswa nemhepo pamusoro penyika yeVenusian inonzi Aphrodite Terra, iyo inosvika pakakwirira ingangoita makiromita mashanu. Chinyorwa .
Mufananidzo wekutanga kubva pamusoro peimwe nyika
Chiso cheVenus kubva kuVenera 9 Gumiguru 20th 1975. Mufananidzo wekutanga kubva pamusoro peimwe nyika. (Mufananidzo mufananidzo wakashongedzwa kutsiva imwe mitsara yemapikisheni akavezwa mumufananidzo wekutanga). NaSoviet Union / Roscosmos / Venera 9 - http://www.mentallandscape.com/C_CatalogVenus.htm Kushandiswa kwakanaka, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=25484636
ZVINOTEVERA: PASI CHITANGO: NGONI
cancer murume uye sagittarius mukadzi pamubhedha
cancer mukadzi uye scorpio murume pabonde
aries mukadzi uye pisces murume anoda kuenderana